#3နှဈအတိုးမဲ့အရဈကြ ဖွငျ့ဝယျယူနိုငျမညျ့ ရနျကငျးရဲ့အကောင...
Phone No. To Contact Real Estate Maverick
Ad Number S-10190696
Real Estate Maverick Close
​တောင်​ဥက္ကလာ၊ (5)ရပ်​ကွက်​ ၊ ပင်းယလမ်းသွယ်​တွင်​၊ 40'x60', BN-2, ​ရေ၊မီး၊ ဂရန်​​မြေ။
​တောင်​ဥက္ကလာ၊ (5)ရပ်​ကွက်​ ၊ ပင်းယလမ်းသွယ်​တွင်​၊ 40'x60', BN-2, ​...
Ad Number S-10190039
​တောင်​ဥက္ကလာ၊ (10)ရပ်​ကွက်​၊ ​ဇေယျာလမ်းသွယ်​တွင်​၊ PT , ​ရေ၊မီး၊ ဂရန်​​မြေ။
​တောင်​ဥက္ကလာ၊ (10)ရပ်​ကွက်​၊ ​ဇေယျာလမ်းသွယ်​တွင်​၊ 40'x60'၊ PT, ​ရေ၊မီး ...
09421045692, 09785555699, 094788855333, 09266677877, 09420074367
Ad Number S-10189931
ဗဟနျး သံလှငျလမျးသှယျ RC-3 လုံးခငျြးအမွနျရောငျးမညျ။
Ad Number S-10189769
ဓမ္မ ရာဇာလမ်း၊ ​တောင်​ဥက္ကလာ၊ (10)ရပ်​ကွက်​၊ 44'x60'၊ ​မြေ၊ ​ရေ၊မီး၊ ဂရန်​​မြေ။
​တောင်​ဥက္ကလာ၊ (10)ရပ်​ကွက်​၊ ဓမ္မ ရာဇာလမ...
09421045692, 09785555699, 09420074367, 09266677877, 09420074367
Ad Number S-10189729
လှိုငျမွို့နယျ အငျးစိနျလမျးမကွောကပျ ဘာတာမှတျတိုငျအနီး ဒုတိယထပျအခနျး အမွနျရောငျးမညျ
Phone No. To Contact Pannthadinn May RealEstae
Ad Number S-10189336
Pannthadinn May RealEstae Close
သုမင်ျဂလာလမျးမကွီးဒဲ့ပေါကျ Mini Condo ပွငျဆငျပွီး အသငျ့နေ အခနျးသနျ့လေး ရောငျးမညျ
830 Lakh (Kyats)
Phone No. To Contact မေသုခ အိမ်ခြံမြေအကျိုးဆောင်
Ad Number S-10192601
မေသုခ အိမ်ခြံမြေအကျိုးဆောင် Close
Ad Number S-10192585
Ad Number S-10192535
11,500 Lakh (Kyats)
Phone No. To Contact MC Real Estate
09421067491 09421113796 09254446262
Ad Number S-10192521
MC Real Estate Close
Ad Number S-10192498
Ad Number S-10192481
Phone No. To Contact Win Thiri Real Estate Service
Ad Number S-10192439
Win Thiri Real Estate Service Close